The Internet Freedom Project
ပင်မနေရာ မူဝါဒ/ဥပဒေ ကြေညာချက် The Internet Freedom Project
The Internet Freedom Project	Tuesday, 17 July 2012 15:49	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- ကြေညာချက်	User Rating: / 1
PoorBest ????????????????????????? Proxy Server ?????????????????
Formed in mid 2011, the Internet Freedom Project isanon-profit organization that provides free and customized internet attack mitigation solutions for websites being attacked by repressive governments or anti free speech advocates. The type of attacks we typically defend against are denial of service attacks and hacking. If you runawebsite that promotes free speech onaparticular issue and you believe it is being attacked because of the ideas presented on your website, feel free to contact us (see form below) and we can look at what service we can provide you.
Contact: Please visit and fill the form in the following website
Note: free speech has its limits and we will not support any website that advocates violence or other internationally recognized illegal acts.
၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်လည်ပိုင်းမှ စကာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အင်တာနက် လွတ်မြောက်ရေး စီမံကိန်းဟာ အကျိုးအမြတ်မယူတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမှ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းဟာ ၀က်ဘ်ဆိုဒ် တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းတွေကို ပြန်လည်ခုခံ ကာကွယ်တားဆီးပေးကာ အခမဲ့စနစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြေခံ ကျွန်တော်တို့ ကာကွယ်တားဆီးပေးတဲ့ တိုက်ခိုက်နည်း စနစ်ပုံစံကတော့ Denial of Service (DOS) တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ တကယ်လို့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေက ထူးခြားဖြစ်စဉ် အကြောင်းအရာများကို လွတ်လပ်စွာ ပေးဝေတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုအား တည်ထောင်လှုပ်ရှားနေကာ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ ယုံကြည်နေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဆီ ဆက်သွယ် နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေ လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုတင်ပြတဲ့အခါ အတိုင်းအတာ အကန့်အသတ် ရှိသင့်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်အောင် စေ့ဆော်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ တရားမ၀င် ပြုမူလုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဖြစ်အောင် စေ့ဆော်ခြင်း စသဖြင့် ဒုစရိုက်လုပ်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်များကို ထောက်ပံ့ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
Last Updated ( Friday, 17 August 2012 00:46 )